Real Gaming Myanmar - Page 104 of 161 - Real Gaming & Technology
တစ်ချိန်က ဆင်းရဲလှတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ရဲ့ လူတွေအိုလာရင် စွန့်ပစ်တဲ့ ဓလေ့မှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ဂျပန်ရိုးရာ ပုံပြင်လေးတစ်ခု ဖတ်ဘူးတယ်။ သိပ်လည်း ကြိုက်ခဲ့တယ်။ အမြဲလည်း …
သင်္ကြန် တွင်းတော့ အတူတူ အိမ်တွင်းပုန်း ဖြစ်ဖို့ များတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဂျာမနီ အဆိုတော် မစ်ကီနဲ့ မြန်မာမလေး စုစုတို့ စုံတွဲ
သင်္ကြန် တွင်းတော့ အတူတူ အိမ်တွင်းပုန်း ဖြစ်ဖို့ များတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဂျာမနီ အဆိုတော် မစ်ကီနဲ့ မြန်မာမလေး စုစုတို့ စုံတွဲ . . . …
Comment တွေဖတ်ပြီး ပါးကျိန်းနေရတယ် ဆိုတဲ့ သံသာမိုးသိမ့် MRTV4ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ “ကျွန်မက မဟေသီ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်း တွဲ က တေ့ာ …
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် မဟာသင်္ကြန်စာ အထူးထုတ်
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် မဟာသင်္ကြန်စာ အထူးထုတ် ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (၁၃)ရက် (၁၇-၄-၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် နှစ်ဆန်း (၁) ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။ သာသနာတော် …
အချစ်ဆိုတာ နှလုံးသားချင်းဆက်နွယ်နေမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာမျိုးပါ။ အချစ်ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ ဒီလိုယောကျာ်းမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရမှာပါ။ သင်ရော ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီးလား ။ ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီးဆို အရင်ကထက် ပိုလိမ္မာပါတော့နော်။ (၁) သင့်ကို နားလည်မှုအပြည့်ပေးထားတယ် …
“မိခင်မေတ္တာကြီးမားပေစွ” ဒီပုံကို ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရင် အများစုက ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်လို့ မြင်ကြလိမ့်မယ် …. ။ကိုယ်ကတော့ ဒီပုံမှာ မိခင်မေတ္တာကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ် …. ။ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ အပြစ်မတင်ပါဘူး။အလွဲတွေနဲ့ …
ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလေးလှဖို့၊ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့၊ အသားအရေ ကြည်လင်ဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းပဲလုပ်ရင်ရပြီဆိုရင် အံ့သြသွားမလား။ ပျိုမေတို့အတွက် တစ်နေ့တာမှာ အချိန်အနည်းငယ်ပေးရုံနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှ၊ အသားအရေအလှအတွက်သာမက ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို ပျိုမေတို့အတွက် …
အာရုံကြော အားနည်းခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ နောက်ဆက်တွဲဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်လဲ …. အာရုံကြော အားနည်းရောဂါ သည် အာရုံကြောများ ပျက်စီးမှု ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ အာရုံကြောများ၏ တာဝန်မှာ …
ဆရာမင်းသိမ်းခိုင်၏ ၂၀၁၉ ဧပြီ ၈ ရက်မှ ၁၅ ရက် အတွင်း ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ယတြာပြုရန်
မိတ်ဆွေများ အားလုံးအတွက်၂၀၁၉ ဧပြီလ (၈)ရက်မှ ၊ (၁၅) ရက် အတွင်းဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁) ပတ်စာ …
သင်ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘတ်ကို စောင်းအိပ်တက်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ထီပေါက်တာထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသွားပါပြီ…
ဘာကြောင့် ဒီလိုမေးရသလဲဆိုတော့ သင်ရဲ့အိပ်စက်ပုံဟာ သင်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းကိုအရေးတကြီး ပတ်သတ်နေလို့ပါပဲ။အကယ်၍ သင်အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်လေ့မရှိရင်တော့ အခုဖော်ပြသွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို အဆုံးထိဖတ်ကြည့်ရင်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ သင်ကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်သို့စောင်းအိပ်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ …
Page 104 of 161« First...8090100«102103104105106»110120130...Last »